I-China Capacitor itshintshela iswitshi yovuselelo lwamandla okusebenza kwenkqubo ye-nfc-f2 0.4k yokuvelisa kunye nefektri | ukudumba
Iswitshi sokutshintsha kokutshintsha kwembuyekezo yamandla e-nfc-f2 0.4k yenkqubo
Ukuphakama kweposta: ≤ 2500m
Iqondo lobushushu elisebenzayo: - 20 ℃ ～ + 55 ℃
Ubushushu bokugcina: - 25 ℃ ～ + 60 ℃
Ukusebenza kombane: 380V (ngaphakathi kwesigaba L1 kunye neL3)
Ikaliwe amandla ombane: inkqubo ye-0.4kV
Ukulinganisa ukusebenza ngoku: 90a (resistive)
Imowudi yolawulo: ulawulo lwenethiwekhi yezibuko
Ukusetyenziswa kwamandla: ≤ 3VA
Ixesha lokuphendula: kwi-40ms
Umthamo wokulawula: ≤ 40kvar kwisigaba esithathu se-480v sokumelana namandla ombane
≤ 10kvar eyodwa 250V ukumelana ombane
Ukhuseleko yangoku: 0 ~ 99A adjustable
Ukukhuselwa kobushushu: Akukho
Uxinzelelo koxinzelelo lokudibana: ≤ 100mV
Uqhagamshelwano ukumelana ombane: ≥ 1600V AC
Unxibelelwano kulawulo lonxibelelwano: RJ45 ujongano
Ukuseta idilesi: 1 ~ 32 inokuseta
Nokuba ngaba ukuxhasa iqonga lelifu: ukhetho
Imowudi yokuphuma nangaphandle: phezulu nangaphandle
Ukufakwa: isikhokelo sikaloliwe / isikrufu
Lobukhulu seyiyonke: 143 × 90 × 107mm
Uchungechunge lwe-F2 iMechatronics (ehambelanayo) iswitshi isebenza kutshintsho lwe-capacitor esetyenziselwa imbuyekezo yamandla asebenzayo kwinkqubo ye-0.4kV. Isebenzisa itekhnoloji yokulinganisa ye-AC encinci ye-single-chip kunye ne-zero yokuqhubela phambili yokuwela i-algorithm yokuqinisekisa ukuba isenzo ngasinye sokutshintsha sichanekile kwaye sinqanda ifuthe lesenzo se-capacitor yesebe kwigridi yamandla. Isenzo sokutshintsha kokutshintsha samkela ujongano lwe-RJ45, kwaye umsebenzi okhuselweyo okhoyo ngoku uthintela inkqubo ekubeni ihambelane.
I-Q1: Ulawula njani umgangatho wakho wefektri?
I-A1: Umgangatho ubaluleke kakhulu kuthi. Ukuze ukulawula umgangatho ngcono, siye QC zobungcali. Zonke iimveliso zethu zidlula ukuhlolwa nguQC ngaphambi kokuziswa.
I-A2: I-MOQ yoku-odola ngokubanzi iqala ngo-1pc, ukuze i-OEM iqale kwi-50-100pcs.
I-Q3: Ngaba uyayibonelela ngeNkonzo ye-OEM kunye ne-ODM?
I-A3: Ewe, kuyilo lwemveliso ukuya ekupakisheni, iinjineli zethu ziyilo ngokuchanekileyo njengeemfuno zakho. Naluphi na uhlobo lokuprinta ilogo okanye uyilo luyafumaneka ukuba ubungakanani beodolo yakho bulungile
Q4: Ndingalufumana njani iisampulu?
I-A4: Ngokwesiqhelo, sinikezela kuphela iisampulu zasimahla kubaxumi bethu abaqhelekileyo. Kubathengi abatsha, sinokubuyisa umrhumo wesampulu emva kokubekwa kwe-bulk.
Q5: Leliphi ixesha lokuhambisa lesampulu?
I-A5: Sifuna iintsuku ezi-3 ~ 4 kwiisampulu eziqhelekileyo, iintsuku ezi-4 ~ 6 okanye ngaphezulu kuya kuthi ukuba isampulu ifune i-OEM, kwaye emva koko iya kuthunyelwa ngokudlulisa kwaye ifike ngeentsuku ezili-15.
Q6: Yeyiphi indlela yokuhambisa?
I-A6: Inokuba kukuhambisa ngenqanawa e-Ocean, iAirlift kunye ne-Express (EMS, UPS, DHL, TNT kunye neFEDEX). NGOKU phambi kokubeka iodolo nceda unxibelelane nathi ukuze uqinisekise indlela oyikhethileyo yokuhambisa.
I-Q7: Uyihlawula njani imali?
I-A7: Kwi-odolo yesampulu, sinokwamkela i-Western Union, i-Wire transfer okanye i-Escrow.
Kodwa iodolo ye-Batch, siyalixhasa ixesha lokuhlawula nge-T / T (i-30% yedipozithi kwangaphambili, ibhalansi ye-70% ngaphambi kokuthunyelwa).
Egqithileyo I-NFC-401/402-F1 Mechronics yokutshintsha kokutshintsha
Okulandelayo: I-Nfc-401/402-F3-B edityanisiweyo yokutshintsha okuhambelanayo kunye nekhefu lesekethe encinci kunye nokutshintsha
Umlawuli okrelekrele otshintsha ukutshintsha
Ukutshintsha uMlawuli weCapacitor
Ukutshintsha umbane ngombane
I-JKWF-12 (A / B) yamandla akrelekrele asebenzayo amandla ...
I-JKWI-12 (A / B) -32-S / D RJ45 yenethiwekhi ujongano lwenethiwekhi ...
I-NFC-PCA-NF2 / 0.48 / 7% / 40 / G isinxibelelanisi samandla ...
I-Nfc-401/402-LS iswitshi yotshintsho lwe-16 poin ...
I-NFC-TSC-S / D iTyristor switch elawulwa yi-netw ...
I-JKWE-21 (A / B) Qhagamshela utshintsho lwezinto ...
Idilesi:Igumbi 1401, iyunithi 1, ukwakha 3, No. 99, umsesane South zangaphandle, zobugcisa Zone, Xinxiang City, kwiPhondo Henan